ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Kobo Glo၊ Kobo စာဖတ်သူအသစ် | eReaders အားလုံး
စျေးပေါသော e-book များ
ပြန်လည်သုံးသပ်: Kobo Glo, Kobo ereader အသစ်
Villamandos | | ကုမ္ပဏီများမှ, Kobo
El ကိရိယာအသစ် သူတို့သည်နာမဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟုဆိုလျှင်၊ Kobo Glo Amazon ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူရပ်တည်ရန်ရှင်းလင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မွေးဖွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်မကြာသေးမီကခေတ်မီခဲ့သော Kindle အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။
၎င်း၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာကျွန်ုပ်တို့ resolution 1024 × 768 pixels ရှိပြီး resolution ရှိသောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည် တစ် ဦး ရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသောစာဖတ်ခြင်းအရည်အသွေးကိုပေးပါလိမ့်မယ် နှင့်မျက်နှာပြင်၏ illumination အဆင့်ကိုထိန်းညှိ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ (နောက်ခံအလင်းနှင့်အတူရောထွေးမရ) ။
ဒီကိရိယာကိုစိတ် ၀ င်စားစရာပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုစလုပ်ဖို့အတွက်၎င်းရဲ့အလင်းရောင်စနစ်ကိုရှာဖွေဖို့ကြိုးစားခြင်းဖြင့်စတင်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် သက်တောင့်သက်သာရှိသောအလင်းရောင် ၎င်းသည်အခြားကိရိယာများတွင်တွေ့ရသည့်ဥပမာကိုသတိရစေသည် GlowLight နှင့်အတူ Nook SimpleTouch.
အ Kobo Glo ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
အရွယ်: 114x157x10 မီလီမီတာ
ဖန်သားပြင်: ၆၂ လက်မ resolution (resolution) 1024 × 768 pixels နှင့် 16 ကွဲပြားခြားနားသောမီးခိုးရောင်အဆင့်များ
လုဇမြို့တည်းဟူသော: ဒီကိရိယာကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်နှင့်အလင်းဖြန့်ဖြူးမှုအတွက်ခက်ခဲတဲ့ micro-thin layer နဲ့အတူ built-in Comfort Light Technology ဖြင့်ဖန်တီးထားသည်။
ဖန်သားပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ဖန်မရှိဘဲတည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်သော touch screen သည် anti-glare ဖြစ်ပြီးလက်ဗွေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
ခလုတ်ဖြေ။ ။ ခလုပ်နှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုမှာစက်ကိုဖွင့် / ပိတ်လို့ရပါတယ်။ ဒုတိယခလုတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်၏အလင်းကိုစီမံနိုင်သည်
ဆက်သွယ်မှုဖြေ - Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်
သိုလှောင်မှု: စက်၏ internal memory2Gigs ဖြစ်ပြီး Micro SD ကဒ်ဖြင့် 32 Gigs အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
ဘက်ထရီတရားဝင် Kobo ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့သည့်ဘက်ထရီသည်ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်မီးပိတ်ခြင်းနှင့်တစ်လအထိကြာရှည်အသုံးပြုနိုင်ပြီးမီးနှင့်အတူအဆက်မပြတ်အသုံးပြုနေသောနာရီပေါင်းငါးဆယ်ငါးနာရီခန့်ကြာနိုင်သည်
Kobo Glo ၏စျေးနှုန်းမှာ ၁၂၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြစ်သည်, စျေးကွက်ရှိအခြားစက်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသောစျေးနှုန်းနှင့်အလွန်ဆင်တူသောလက္ခဏာများရှိသည်။
မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ကြိုးစားပြီးမှရိုးသားမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ထင်မြင်ချက်ပေးရမယ်ဆိုရင် (အရမ်းကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့လွှဲလို့မရဘူး) ငါထင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစက်ကိရိယာများနှင့်အချို့သောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်းတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေသည်အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်း၊ အပြီးသတ်ခြင်းနှင့်အဓိကပြိုင်ဘက်များ၏အမြင့်ကိုရောက်ရှိရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရရှိခြင်း။
အကယ်၍ သင်သည် Kobo Glo အသစ်ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပြီး၎င်းသည်သင့်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကပင်ယုံကြည်စိတ်ချစေခဲ့လျှင်၎င်းကိုအကြံပေး။ ချက်ချင်း ၀ ယ်ပါ။ ၎င်းသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - နှိုင်းယှဉ်ခြင်း: Sony PRS-T1 နှင့် Sony PRS-T2
ရင်းမြစ် - Kobo.com
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Kobo » ပြန်လည်သုံးသပ်: Kobo Glo, Kobo ereader အသစ်
အကောင်းဆုံး eReaders များ
အခွင့်အလမ်းအားသာချက်ကိုယူပြီးအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး eReaders အချို့ကိုရယူပါ
Kindle ထွက်ပေါက်Kindle Paperwhiteအိုအေစစ် Kindle
8 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Daniel Soler ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့9အနှစ်
အရည်အသွေး - စျေးနှုန်း - စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်အခြား e-Readers များ၏အားသာချက်များအားလုံးကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်များပြားသောစျေးနှုန်းမပါဘဲထည့်သွင်းရန်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောမြင်ကွင်း၊ အလင်းရောင်၊ ဝိုင်ဖိုင်၊ ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှု၊ Micro-SD နှင့်အလွန်ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်းရှိသည်။
ယူရို ၁၃၀ သည်ကောင်းစွာသုံးစွဲခဲ့သည်။
Daniel Soler အားပြန်ပြောပါ
Jordi Gisbert ဟုသူကပြောသည်
ဒီခရစ်စမတ်အတွက်မည်သည့်စာဖတ်သူကိုကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးလိမ့်မည်နည်း။ သို့မဟုတ်အခြားသူများကို ၀ ယ်သင့်သည်၊ အကယ်၍ အဖြေကကြင်နာပါကမည်သူ့ကိုသင်အကြံပြုသနည်း။
Jordi Gisbert အားပြန်ကြားပါ
ဒါကကူညီမယ်ဆိုရင်ငါ ereader ပြောင်းတော့ Sony PRS-T2 နဲ့ Kindle Paperwhite ကိုဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်စဉ်းစားတယ်။
Kobo Glo ကိုဝယ်ပြီးစာအုပ်အနည်းငယ်ကိုကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာမှာ PDF နဲ့ကူးယူထားတယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာကသူတို့ကို ebook ကိုပြောင်းပြီးဖွင့်ပါ။ စာကသိပ်ပြီးမများပါဘူး။ အဲဒါကိုကျွန်တော့်ကိုပိုကြီးအောင်လုပ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မသိတဲ့စကားလုံးတွေကိုအဘိဓာန်ထဲမှာရှာဖွေတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ ..
ဒါကြောင့်ငါ ebook အတွက်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုကြိုးစားခဲ့ကြပြီးသူတို့ငါ့ကိုငါ့ကိုရွေးချယ်စရာပေး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် kobo မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောစာအုပ်များနှင့်အတူအဘိဓါန်နှင့်စာသားအရွယ်အစားစသည်တို့ကိုသာသုံးနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသလား။
ကူညီပါ !!! 🙂
သင်၌ရှိသည့် pdf ဖိုင်များသည် ၆″ စာဖတ်သူအတွက်မဟုတ်ဘဲ A4 အရွယ်အစားစာရွက်အတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ pdfs ဖြင့်စာလုံးအရွယ်အစားကိုသင်စီမံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင့်အား reflow နှင့် zoom ဖြင့် "play" ခွင့်ပြုမည်။ ထို့ကြောင့်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။
Irene Benavides အားပြန်ကြားပါ
၎င်းမေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမှာဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုသည်သင်၏စတိုးဆိုင်နှင့်သာအသုံးပြုရန်လား၊ သို့မဟုတ်သင့်တွင်အင်တာနက် browser ရှိသလား။
လွန်ခဲ့တဲ့ 8 အနှစ်
တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုအားသွင်းဖို့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆဲလ်သေးသေးလေးတစ်ခုထားဖို့ ebook ကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ကျန်ရှိနေသေးသောကြာချိန်ရှိခဲ့လျှင် (သဲကန္တာရကျွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်လျှင်တောင်😉)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက်ကိုကာလီဘာ (၂) နဲ့စီမံခဲ့တယ်